UManuel Rivas, lelinye lawona manani abalulekileyo kuncwadi lwaseGalician | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | I-Biography, Ababhali
Caphulelwa nguManuel Rivas.
UManuel Rivas ngumbhali waseSpain othathelwa ingqalelo njengoyena mntu ubalasele kuncwadi lwangoku lwamaGalician. Ngexesha lomsebenzi wakhe ebezinikezele ekwandiseni iinoveli, izincoko kunye nemisebenzi yesihobe; oko yena ngokwakhe akubiza ngokuba "kukuthubelezisa isini". Uninzi lweencwadi zakhe luguqulelwe kwiilwimi ezingaphezu kwama-30, kwaye ezinye zilungiselelwe umboniso bhanya-bhanya ngezihlandlo ezahlukeneyo.
Ngokufanayo, umbhali waseGalikhi uye wema ngaphandle ngomsebenzi wakhe kwicandelo lobuntatheli. Lo msebenzi ubonakalisiwe kukudityaniswa kwawo: Ubuntatheli libali (1994), nesetyenziswa njengombhalo ekubhekiswa kuwo kwiiFakhalthi zeSayensi yoLwazi eSpain.
1.1 Imisebenzi yobuntatheli
1.2 Uhlanga loncwadi
2 Iincwadi ezilungileyo zikaManuel Rivas
2.1 Undifuna ntoni, sithandwa? (1997)
2.2 Ipensile yoMchweli (2002)
2.3 Amazwi aphantsi (2012)
Umbhali nentatheli uManuel Rivas Barrós wazalelwa eLa Curuña nge-24 ka-Okthobha ka-1957. Wayevela kusapho oluthobekileyo, umama wakhe wathengisa ubisi kwaye utata wakhe wayengumsebenzi wezitena. Ngaphandle kweziganeko, wakwazi ukufunda kwi-IES Monelos. Kwiminyaka kamva-ngelixa wayesebenza njengentatheli- Wafunda kwaye wafumana isidanga sakhe kwiiNzululwazi ngezoLwazi kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid.
URivas ubenomsebenzi omde njengentatheli; Uye wangena kwimithombo yeendaba ezibhaliweyo, nakunomathotholo nakumabonwakude. Kwiminyaka eyi-15 wenza umsebenzi wakhe wokuqala kwiphephandaba Ingcamango yeGalician. Ngo-1976 wangena kwiphephancwadi Iteima, isithuba kubhalwe ngesiGalician.
Umsebenzi wakhe kwimagazini yaseSpain uyabonakala Guqula i-16, apho waphela sele enguSekela Mlawuli kwaye ulawula indawo yenkcubeko ye Ibhaluni. Ngokumalunga nokuthatha inxaxheba kwayo kwicandelo likanomathotholo, yavula kwakhona ngo-2003 - kunye noXurxo Souto— I-Cuac FM (Unomathotholo waseLa Curuña). Ngoku usebenza njengombhali wephephandaba Ilizwe, Umsebenzi ebewenza apho ukusukela ngo-1983.
URivas wabhala imibongo yakhe yokuqala kwii-70s, awayeyipapasha kwiphephancwadi elinamagama eqela Loya. Kuyo yonke indlela yokuhamba kwayo njengembongi izise imibongo elithoba kunye nembali ebizwa ngokuba: Idolophu yasebusuku (1997). Incwadi ithi iyancedisana ne-disc, apho yena ngokwakhe efunda iingoma ezili-12.
Kwangokunjalo, umbhali uye wazama ukwenza iinoveli ngenani leempapasho ezili-19. Umsebenzi wakhe wokuqala kolu hlobo unegama Iinkomo ezizigidi (1989), equlathe amabali kunye nemibongo. Ngalo msebenzi, iRivas iphumelele okokuqala ibhaso leGalicic Narrative Criticism.
Ngexesha lomsebenzi wakhe Upapashe imisebenzi eliqela emnike ukungaziwa, njengokuqokelelwa kwamabali Undifuna ntoni, sithandwa? (1995). Ngale nto wakwazi ukufumana amabhaso eSizwe okuBalisa (1996) kunye noTorrente Ballester (1995). Ngaphakathi koku ingqokelela yile: Ulwimi lwamabhabhathane, Ibali elifutshane eliguqulelwe kumdlalo bhanyabhanya ngo-1999 kwaye laphumelela ibhaso likaGoya lokudlala umdlalo weqonga ngo-2000.
Phakathi kwemisebenzi yakhe efanelekileyo sinokukhankanya: Ipensile yomchweli (1998) Amalangatye alahlekileyo (2002) Thina sobabini (2003) Yonke into ithi cwaka (2010) y Amazwi aphantsi (2012). Incwadi yokugqibela ebhalwe ngumbhali ngu Ukuphila ngaphandle kwemvume namanye amabali asentshona (2018), equlathe iinoveli ezimfutshane ezintathu: Uloyiko lweehedgehogs, Ukuphila ngaphandle kwemvume y Ulwandle olungcwele.
Iincwadi ezilungileyo zikaManuel Rivas
Undifuna ntoni, sithandwa? (1997)
Yincwadi eyenziwe ngamabali ali-17 achaza imixholo eyahlukeneyo enxulumene nobudlelwane babantu, ngokwesintu nangoku. Kulo mdlalo umoya wobuntatheli wombhali ubonakalisiwe, Apho uthando lusisiseko kuwo onke amabali. Olu luvo luboniswa ngeendlela ezahlukeneyo: ukusuka kwi-platonic ukuya kwintlungu ebuhlungu.
Abanye kwezi Amabali anethoni eyonwabisayo nehlekisayo, kodwa amanye achukumisa imixholo eyomeleleyo, ukubonakaliswa kwenyani yangoku. Abantu abadlala phambili kula mabali baqhelekile kwaye balula, njengala: umhambi, umntu wasengubeni, imvumi eselula, abantwana nabahlobo babo abasenyongweni; nganye inesibheno esithile.
Phakathi kwamabali, oku kulandelayo kuvela: Ulwimi lwamabhabhathane, ibali phakathi kosana notitshala wakhe, echaphazeleka kukutshatyalaliswa kwe30. Eli bali lahlengahlengiswa ngempumelelo kwiscreen esikhulu nguAntón Reixa. Okokugqibela, kufanele kuqatshelwe ukuba le ngqokelela yaguqulelwa kwiilwimi ezingaphezu kwama-30 kwaye yavumela umbhali ukuba abonwe kwihlabathi loncwadi.
Undifuna ntoni, sithandwa? ...
Amabali e Undifuna ntoni, sithandwa? (1997):
"Ufuna ntoni sithandwa?"
"Umama ongumama kaVermeer"
"UMphathiswa kunye ne-Iron Maiden"
"Amangcwaba amakhulu eHavana"
"Intombazana enxibe ipirate"
"Intyatyambo emhlophe ngamalulwane"
"Ukufika kobulumko nexesha."
Ipensile yomchweli (2002)
Incwadana yothando nayo ibonisa ubunyani bamabanjwa aseRiphabhlikhi kwintolongo yaseSantiago de Compostela, ngo-1936. Ibali libaliswa kumntu wokuqala nowesithathu ngabalinganiswa ababini abaphambili: UGqr.Daniel Da Barca kunye noHerbal. Bayinxalenye ebalulekileyo yeli yelenqe: UMarisa Mallo kunye noMzobi - ibanjwa elizoba imiboniso eyahlukeneyo ngepensile yomchweli.
Kule noveli Ibali lothando phakathi kukaGqr.Daniel Da Barca -riphabliki- kunye noMarisa Mallo omncinci uboniswa. UDa Barca uwa libanjwa ngenxa yeengcinga nezenzo zakhe zopolitiko. Oku kuyanzima ubudlelwane phakathi kwaba babini, njengoko kufuneka balwele uthando lwabo, umtshato wabo wexesha elizayo kude kunye nenyani yokuba ilizwe liphela lihlala.
Kwelinye icala, kukho ibanjwa u-Herbal, odibana noDa Barca entolongweni aze athi phithi nguye. Eli gosa ngumntu ophazamisekileyo, okonwabelayo ukungcungcuthekiswa kunye nokuphathwa gadalala, kwaye wenze uninzi lwezenzo zokubulawa entolongweni.
Umzobi, kwelakhe icala, ubalasele ngetalente yakhe enkulu yemifanekiso. Yena wazoba iPórtico de la Gloria, nalapho wenza intetho ngamaqabane awayexhatshazwa. Umsebenzi wenziwa ngepensile yomchweli nje, eyathathwa nguHerbal ngaphambi kokuba ayenze.
Njengoko ibali liqhubeka, ugqirha ugwetyelwe ukufa. Ngaphambi kokubulawa kwakhe, uphathwa gadalala nguHerbal, ozama ukubuphelisa ubomi bakhe ngaphambi kokuba isigwebo sigqitywe. Ngaphandle kobunzima, uyakwazi ukusinda nokuzalisekisa umnqweno wakhe wokutshata nothando lobomi bakhe. Kwiminyaka kamva, ukhululeka aze aphele ekuthinjweni eLatin America, Ukusuka apho axelela inxenye yakhe yebali kudliwanondlebe.
Ipensile yomchweli ...
Amazwi aphantsi (2012)
Ingxelo ebalisa ngobomi bamava ombhali kunye nodadewabo uMaría, ukusuka ebuntwaneni ukuya ebudaleni eLa Curuña. La Imbali ichazwe kwizahluko ezimfutshane ezingama-22, nezihloko ezinika intshayelelo encinci kumxholo wayo. Kwinoveli, umlinganiswa ophambili ubonakalisa uloyiko kunye namava ahlukeneyo kusapho lwakhe; uninzi lwezi zinetoni elusizi kunye nostalgic.
UManuel Rivas uxela iinkumbulo zobuntwana bakhe nosapho, egxininisa ngokukodwa kwinkcubeko yaseGalicia nakwimihlaba. Uninzi lweziganeko ebomini bakhe zichazwe ngokufutshane, ngeemvakalelo ezicacileyo ezixubeneyo.
Kweli bali uMaría umi - udadewabo othandekayo-, ambonisa njengentombazana evukelayo enomlingiswa ophawulweyo. Uzukisiwe ngokusuk 'entliziyweni ekupheleni komdlalo, njengoko waswelekayo emva kokuphathwa ngumhlaza onamandla.
Amazwi aphantsi (Eyona ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » UManuel Rivas
UPaz Castelló. Udliwanondlebe nombhali we Akukho namnye kuthi oya kuba nemfesane
UEmilia Pardo Bazán. Iminyaka eli-100 emva kokufa kwakhe. Amaqhekeza ebali